15 / 05 / 2021 28 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 398 Views စာ0မှတ်ချက် ၄၇၃၅ မုဒိတာ, 71028 ဟယ်ရီပေါ်တာစီးရီး 2, 75054 ကို AT-AT, Hoth အပေါ် 75098 Assault, ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ဂရက်ဂိုရီ Goyle, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Hermione granger, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, Millicent Bulstrode ဖြစ်သည်, reviews, Ron Weasley, Star Wars, ဗင်းဆင့်ကရာဘီ
တစ်ခုချဲ့ထွင်အဖြစ်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အဓိကနေရာယူထား ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, နိုင် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု ဒီနှစ်ကျော်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာလုံးပေါင်းချပစ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ တန်းစီပါ?
surelyကန်အမှန်ရှိခဲ့ကြောင်းအပြောင်းအရွေ့၌တည်၏ Lego ဒီနွေရာသီရဲ့နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အဖွဲ့များဟာနားကနေနားကိုပြုံးပြီး Group of bean ကောင်တာများကအဓိကကျတဲ့အချိန်ကိုခွဲထွက်လိုက်ပါတယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်လှိုင်း၏ modular ချဉ်းကပ်မှု၏အားသာချက်ကိုယူပြီး - မော်ဒယ်နှစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏မူရင်း၏ aping ဟယ်ရီပေါ်တာ စုံများ - ဒုတိယထပ်မိန်းကလေးများ၏ရေချိုးခန်း (အခန်းထဲဝင်ပေါက်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်) ကိုသီးခြားစီရောင်းရန်။
အဆိုပါ p နေစဉ်artအတွက်ပုံဖော် icular မြင်ကွင်းတစ်ခု ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသျှင်သုံးယောက်ဟာလျှို့ဝှက်ဝင်ပေါက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမတိုင်မီကြာမြင့်စွာကတည်းကဒီမဟာဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီလှိုင်းထဲမှာစျေးအသက်သာဆုံးမော်ဒယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့သီးခြားရပ်တည်မှုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကုန်းမြင့်မြင့်စစ်ပွဲကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။
theme: ဟယ်ရီပေါ်တာ အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 အပိုင်းပိုင်း: 217 အသေးစားပုံများ: 4
ယခုနှစ် ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အရာနှစ်ခုသည်မူလအကွာအဝေးမှအလွန်တိကျသောမော်ဒယ်များကိုပြန်လည်ခေါ်ယူသည့်နေရာ၊ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု 2002 set ၏အနှစ်သာရကိုယူနှင့်ကနေကွာဟမှုကိုဖြည့်ဖို့ကအသုံးပြုသည် classic Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ တန်းစီပါ။
၄၇၃၅ Slytherin ကဲ့သို့ဤအသစ်ပြောင်းလဲထားသောမော်ဒယ်သည်ဟယ်ရီ၊ Ron နှင့် Hermione တို့၏ Slytherin ဘုံအခန်းအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ခိုးယူမှုများပြုလုပ်ရန် Polyjuice Potion ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း။ (ဝိဇ္ဖာလောကရှိရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်ကင်းဝေးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ )
သို့သော်မူရင်းအစု၏ဒုတိယပိုင်းတစ်ဝက်ကိုပုံဖော်နေစဉ်တွင်ပုံဖျက်ထားသောဟယ်ရီနှင့်ရော်တို့က Malfoy အားလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖိတ်ရန်အောင်မြင်စွာလှည့်စားခဲ့သည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု အရင်ကဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကြိုတင်သိရှိထားခြင်းမရှိပဲဖတ်နေလျှင် ဟယ်ရီပေါ်တာ စာအုပ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ - မင်းက tan ကိုတကယ်ကြိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ် Lego အုတ်များ - ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အတွက်တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားသည်ကို set ၏ခေါင်းစဉ်ကဖော်ပြသည်။ Hermione သည် Millicent Bulstrode ၏ကြောင်ပိုင်ရှင်ထက် Millicent Bulstrode နှင့်ဆင်တူသည်။
Hermione ရဲ့ကြောင်ပုံစံကငါတို့တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး Legoဒါကြောင့်ဒါကကောက်ဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပဲ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု။ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအစုံဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ရူပဗေဒကိုယူတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts လိုအပ်ချက်အခန်း - ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောဈေးနှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်သောဝိဇ္ဇာအတတ်သင်ကျောင်း၏အပိုင်းအစတစ်ခုကို၎င်းအားပိုမိုရှင်းလင်းသော၊ ပိုမိုအသေးစိတ်ကျပြီး ပို၍ သိသာသောအရာများအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည်။
ဒါကတည်ဆောက်မှုမှာသေချာပေါက်မဟုတ်ပါဘူး။ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု သင်စုဝေးရန်သင်မိနစ် ၂၀ အချိန်ယူလိမ့်မည် (သဲအပြာနှင့်အဖြူအုတ်များပေါင်းစပ်ခြင်းသည် Hogw မှကြိုဆိုသည့်အာရုံဖြစ်သော်လည်းarts သည်အညိုရောင်၊ အညိုရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်အပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုနေရသော်လည်း) သို့သော် ၂၁၇ အပိုင်း၏နောက်ဆုံးကိုအောက်တွင်ချန်ထားခဲ့သည့် boxy model တွင်သင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု သို့သေသပ်စွာ slot ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းဆိုလိုသည်မှာအချို့သောဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အခြားမည်သည့် set ကိုမဆိုအလွယ်တကူဟန့်တားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သေးငယ်သောတည်ဆောက်မှု (နှင့်ယူဆရသည်တစ်ခုတည်းသောနံရံတစ်ခု) ၏မတူညီသောစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတွင်အလွန်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသော၊ ကိုယ်ပိုင်ပါ ၀ င်သောမော်ဒယ်ကိုအမှန်တကယ်ပြုလုပ်သည်။
နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့အစိုင်အခဲ vignette ဒါမှမဟုတ် diorama လိုမျိုးခံစားရပေမယ့်အသေးစိတ်မပြောနိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်သာအိမ်ရာသည်ပျော်စရာကောင်းတဲ့တည်ဆောက်မှုဖြစ်ပြီး၊ တောက်ပနေသောအဖြူရောင်နစ်မြုပ်များ (နှင့်ရွှေရောင်ဘုံဘိုင်) များသည် sm တစ်ခုဖြစ်သည်။art ရွေးချယ်မှု - မီးခိုးရောင်အလင်းသည်ပိုမိုတိကျမှုရှိသော်လည်း၊
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ စစ်မှန်သောကစားနိုင်သောအင်္ဂါရပ် (အခန်းထဲသို့ ၀ င်ပေါက်၊ အလယ်ဗဟိုရှိအဖွင့်တစ်ခု၏အနောက်ဘက်၌ရှူရှိုက်မိသည်) (ergo ထဲသို့ဆင်းရန်ဘာမျှမပါဘဲအနည်းငယ်အသုံးမ ၀ င်ဟုခံစားရသည်။ ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း), ဒါပေမယ့်သင်အသေးစားရုပ်ပုံများကိုဇာတ်လမ်းပြောပြရန်ပျော်ရွှင်လျှင်, ဤသည်ဒုတိယထပ်မိန်းကလေးများရေချိုးခန်း၏သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်အာကာသ - အပန်းဖြေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဈေးနှုန်းအရအသေးစားဓာတ်ပုံသုံးခုသည်မျှတသောအရေအတွက်နှင့်တူသည်။ ဒါက ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု ထို့အပြင် 20 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ဇာတ်ကောင်တကယ်ရွှေစေသည် ဟယ်ရီပေါ်တာ စစ်မှန်တဲ့အပိုဆုတစ်ခုလိုခံစားရတယ် - တော်တော်လေး 'meh' တစ်ခုတောင်မှပဲ - က set ရဲ့တခြားအဓိကဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးကိုထုတ်မထုတ်နိုင်လို့ပါ။
ပိုကောင်းတာကမင်းတို့ဒီသေးငယ်တဲ့ပုံစံလေးခုထဲမှာဇာတ်ကောင်ခုနစ်ယောက်လောက်ရနေပြီလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟယ်ရီ၊ ရွန်နဲ့ဟာမီနီယွန်တို့အားလုံးဟာအဲဒီ့အဆိပ်အတောက်ကင်းသောဆေးကို Vincent Crabbe၊ Gregory Goyle နဲ့ Millicent Bulstrode (ကြောင်) အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလို့ရတယ်။
feline headpiece အသစ်သည်အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်အရည်အသွေးနိမ့်သောပုံများဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ လိုင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးပြီးကတည်းကအဆက်မပြတ်နှင့်တသမတ်တည်းဖြန့်ကျက်ခဲ့ပြီး Slytherin ယူနီဖောင်း torsos တွင်သိုလှောင်ရန်စျေးပေါသောနည်းလမ်းမှာအချည်းနှီးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ တိုင်ကြားမှုများရှိပါက Moaning Myrtle သည်ဤမြင်ကွင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုခံစားရပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူရရှိခဲ့စဉ်က 71028 ဟယ်ရီပေါ်တာစီးရီး2စုဆောင်းထားသောအသေးစားခင်ဗျားဒီမျက်မမြင်အိတ်တွေကိုဒီနေ့စင်ပေါ်မှာရှာဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတကယ်ကိုညံ့ဖျင်းတဲ့အချိန်ပဲ Lego ၇၅၈၄ AT-AT အနားယူပြီးမှ ၇၅၀၉၈ Hoth ပေါ် Assault စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်က Group ၏ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအညီအမျှစျေးနှုန်းထက်ပိုမိုသိသိသာသာတည်ဆောက်ပေးထားပါတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts လိုအပ်ချက်အခန်းအသစ်စက်စက်အသေးစားလေးပုံနှင့်အုတ် ၂၄ လုံးနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်လမ်းကြောင်းမှန်အတွက်လမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီတစ်ခုအတွက်စျေးအပြည့်အဝပေးရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်မရှည်နိုင်ဖြစ်နေသည်ကိုဆိုလိုသည်။
၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု Collectible Wizard ကဒ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
သငျသညျကျိန်းသေကောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နေစဉ် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အများဆုံးလုပ်ဖို့ ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကမ်းလှမ်းမှုများစွာရှိနေသေးသည် - ထိုတောက်ပသောအသေးအဖွဲသုံးခု (အထူးသဖြင့်သင်ဤအရာများကိုဂရုစိုက်ပါကရွှေဟယ်ရီ) တွင်သာမကအနှစ် ၂၀ မြောက်လှိုင်း၏ modular သဘောသဘာဝအတွက်အကောင်းဆုံးသောအကန့်အသတ်များကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သနည်း။ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောမြင်ကွင်းတစ်ခုပါ ၀ င်သောကိုယ်ပိုင်ဖျော်ဖြေမှု Lego.
LEGO Harry Potter ၇၆၃၈၉ Hogw တည်ဆောက်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်းarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု?
သင်အတူတကွထားရန်မိနစ် 20 လုံးလိုအပ်ပါတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော sitcom ၏နောက်ခံဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုနောက်ခံတွင်ပေါ်လာပြီးသင်ကိုယ်တိုင်အချိန်ယူပါ။
LEGO Harry Potter 76386 Hogw တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်းarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု?
၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု 217 ကိုအပိုင်းပိုင်းပါဝင်သည်။ ဒါကမနှစ်ကဒီစျေးနှုန်းကွင်းထဲမှာ ၀ င်ရောက်မှုထက် ၂၄ ပိုတယ် ၇၆၃၈၆ Hogwarts လိုအပ်ချက်အခန်း.
LEGO Harry Potter 76386 Hogw သည်မည်မျှကြီးသနည်းarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု?
၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု အမှောင်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ရေး၏ရှုထောင့်ကိုက်ညီ Artစာသင်ခန်းထဲမှာ ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း အနံ ၈ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၁၂ စင်တီမီတာနှင့်နက်ရှိုင်းသော ၆ စင်တီမီတာရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကြီးမားသည့်အစုထဲသို့သေသပ်စွာထည့်သွင်းနိုင်သည်။
LEGO Harry Potter 76386 Hogw သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်းarts: Polyjuice Potion အမှားမှားလား။
၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု အတွက်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအစုံဖြစ်ပါတယ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ နွေရာသီလှိုင်း (အပိုပစ္စည်းများကိုလျှော့စျေး)၊ ယူကေတွင်ပေါင် ၁၇.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၉.၉၉ နှင့်ဥရောပတွင်ယူရို ၁၉.၉၉ ။
← အဆိုပါ LEGO Group startကဲ့ရဲ့ဖို့ ing Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle
LEGO 40500 Wizarding World Minifigure ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် →